Serivisy fako vaovao - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Rehefa miomana hibodo ny tranonao vao vita ianao dia mila mandamina serivisy fako ho an'ilay trano. Ny taratasy fanamarinana momba ny asa dia tsy maintsy apetraka amin'ny Filankevitry ny morontsiraka afovoany alohan'ny hamoahana ireo dabam-pako. Tsy azo aterina any amin'ny trano banga na bongan-tany ny daba.
Ho an'ny ankamaroan'ny mponina, ny serivisy fako vaovao dia ahitana:
Toby fanodikodinan'ny sarony mavo iray 240 litatra voangona indroa isan-kerinandro
Tavoahangin-javamaniry an-jaridaina 240 litatra iray voaangona isan-kerinandro
Tavoahangy mena 140 litatra ho an'ny fako ankapobeny angonina isan-kerinandro
Misy fiovaovan'ireo dabam-pako mifanaraka amin'ny fahasamihafan'ny faritra fonenana ao amin'ny faritr'i Central Coast. Ohatra, ny trano any andrefan'ny Sydney mankany M1 Pacific Motorway dia tsy manana serivisy fanasan-javamaniry zaridaina. Ny mponina dia afaka mahazo fanodinana fanampiny, zavamaniry an-jaridaina na dabam-pako amin'ny sarany kely isan-taona.
Ny tompon-trano ihany no afaka mangataka serivisy fako vaovao. Raha manofa ny trano ianao dia mila mifandray amin'ny mpitantana na ny tompony mba hiresaka momba ity serivisy vaovao ity.
Raha te handamina serivisy fako vaovao dia mila mameno ny Taratasy Fangatahana Fako eto ambany ny tompony na ny mpitantana ny trano.
Taratasy fangatahana fako
Taratasy fangatahana serivisy fako vaovao sy fanampiny ho an'ny trano fonenana 2021-2022
Taratasy fangatahana serivisy fako ara-barotra vaovao sy fanampiny 2021-2022